Debentures(Debentures) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडको २ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ‘सेञ्चुरी डिबेन्चर २०८८’ मंगलबार बाँडफाँड गरिएको छ। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको कार्यालयमा आज बिहान ९ः३० बजे यो ऋणपत्र बाँडफाँड गरिएको हो। १० वर्षे अवधिको वार्षिक १०.५० प्रतिशत ब्याजदर भएको यो ऋणपत्रका अंकित मूल्य १ हजार रुपैयाँ दरका कुल...
सेञ्चुरी बैंकको रु. २.२ अर्बको ऋणपत्र भोलि बाँडफाँड गरिने
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल कमर्सियल बैंक लिमिटेडको १० वर्षे अवधिको ऋणपत्रको भोलि मंगलबार बाँडफाँड हुने भएको छ। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको कार्यालयमा ऋणपत्र बाँडफाँड हुनेछ। ऋणपत्र बाँडफाँड कार्यक्रम बिहान ९ः३० बजे राखिएको छ। बैंकले २ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ‘सेञ्चुरी डिबेन्चर–२०८८’ नामक ऋणपत्र गत...
काठमाण्डौ । तरलताको चरम अभावका कारण बैंकहरुलाई फिटफिटी परिरहेको बेला कान्छो वाणिज्य बैंक सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको ऋणपत्र भने तोकिएको समयभित्रै बिक्री भएको छ। ब्याजदरको तीव्र उतारचढाव हुने नेपालजस्तो देशमा १० वर्षसम्म एउटै ब्याजदर पाइने भएका कारण पनि सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र समयभित्रै पूर्ण...
सेन्चुरी बैंकको रु. २.२ अर्बको ऋणपत्रमा खरिद आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको २ अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज जेठ ४ गते अन्तिम मौका रहेको छ। बैंकले गत वैशाख २१ गतेदेखि १ हजार रुपैयाँ अंकित दरमा कुल २२ लाख इकाइ भएको ‘सेञ्चुरी डिबेन्चर २०८८’ नामक ऋणपत्र जारी गरेको छ। यो ऋणपत्रमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन पाइने धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक ग्लोब आइएमई...
एनएमबि बैंकको ऋणपत्र खरिद गर्ने आज अन्तिम अवसर
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंकको ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आव जेठ ४ गते अन्तिम दिन रहेको छ। गत वैशाख २१ गतेबाट बैंकको एनएमबि ऊर्जा ऋणपत्र (इनर्जी बन्ड–२)को बिक्री खुला गरिएको छ। यो ऋणपत्रको आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिने धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले जनाएको छ। यो ऋणपत्रको १ हजार रुपैयाँ अंकित...
बैंक अफ काठमाण्डूले रु.१.१ अर्बको ऋणपत्र जारी गर्ने, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डूले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। बैंकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा यही वैशा २६ गते ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति माग्दै निवेदन दिएको हो। सेबोनले अनुमति दिएमा बैंकले ‘बीओके डिबेन्चर २०८६’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गर्नेछ। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल...
लुम्बिनी विकास बैंकले रु. १ अर्बको ऋणपत्र जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ
काठमाण्डौ । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले १ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल १० लाख इकाइ भएको ‘११प्रतिशत एलबीबीएल डिबेन्चर–२०८९’ नामक ऋणपत्र निकाष्सन गर्ने भएको हो। यो ऋणपत्र १० वर्ष अवधिको हुनेछ। यसमा लगानीकर्ताले वार्षिक ११ प्रतिशत ब्याज पाउनेछन्। बैंकले यो ऋणपत्र जारी...
एनएमबि बैंकको रु. ३.५ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद लम्बियो
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंकको ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद लम्बिएको छ। गत वैशाख २१ गतेबाट बैंकको एनएमबि ऊर्जा ऋणपत्र (इनर्जी बन्ड–२)को बिक्री खुला गरिएको छ। यो ऋणपत्रको निष्कासन बन्द छिटोमा वैशाख २५ गते हुने भएको थियो। तर, मागबमोजिम आवेदन नपरेका कारण अब यो ऋणपत्रमा जेठ ४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने धितोपत्र बिक्री...
सेन्चुरी बैंकको रु. २.२ अर्बको ऋणपत्रमा जेठ ४ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाण्डौ । सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको २ अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद लम्बिएको छ। बैंकले आज वैशाख २१ गतेदेखि १ हजार रुपैयाँ अंकित दरमा कुल २२ लाख इकाइ भएको ‘सेञ्चुरी डिबेन्चर २०८८’ नामक ऋणपत्र जारी गरेको छ। यो ऋणपत्रमा आज वैशाख २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने भनिएको थियो। तर, मागबमोजिम आवेदन नपरेका कारण यो ऋणपत्रमा...
प्राइम बैंकले रु. ५ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले ५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ। बैंकले ‘प्राइम डिबेन्चर २०८४’ जारी गर्ने भएको हो। यो ऋणपत्र निष्कासनका लागि बैंकले आज (वैशाख २२ गते) नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिँदै अनुमति मागेको छ। सेबोनले अनुमति दिएमा प्राइम बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ५० लाख इकाइ ऋणपत्र...
नेप्सेमा एभरेष्ट बैंकको ऋणपत्र सूचीकृत
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा बिहीबार एभरेष्ट बैंकको ऋणपत्र सूचीकृत भएको छ। एभरेष्ट बैंकको ‘एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र २०८६’ नामक ऋणपत्र सूचीकृत भएको हो। यो ऋणपत्रका १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ८ लाख ५६ हजार ७८३ इकाइ सूचीकृत भएका छन्। एभरेष्ट बैंकको यो ऋणपत्र ८ वर्षे अवधिको हो। यो ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरुले...
सेन्चुरी बैंकको रु. २.२ अर्बको ऋणपत्र आजबाट बिक्रीमा, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको २ अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आज वैशाख २१ गतेदेखि आवेदन खुला गरिएको छ। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरमा कुल २२ लाख इकाइ भएको ‘सेञ्चुरी डिबेन्चर २०८८’ नामक ऋणपत्र जारी गरेको हो। कुल इकाइमध्ये १३ लाख २० हजार इकाइ बैंकले व्यक्तिगत तबरबाट बिक्री गर्नेछ। बाँकी ८ लाख ८० हजार इकाइ सर्वसाधारणका...
एनएमबि बैंकको रु. ३.५ अर्बको ऋणपत्रमा आजबाट आवेदन खुला
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंकको ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र आज वैशाख २१ गतेबाट बिक्री खुला गरिएको छ। बैंकको एनएमबि ऊर्जा ऋणपत्र (इनर्जी बन्ड–२)को बिक्री खुला गरिएको हो। यो ऋणपत्रको १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३५ लाख इकाइ बिक्री खुला गरिएको छ। जसमा २१ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट बिक्री गरिनेछ भने बाँकी १४ लाख इकाइ सर्वसाधारणले आवेदन...
सेन्चुरी बैंकले वैशाख २१ बाट रु.२.२ अर्बको ऋणपत्र जारी गर्ने, ब्याज कति पाइन्छ ?
काठमाण्डौ । सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले यही वैशाख २१ गतेदेखि २ अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरमा कुल २२ लाख इकाइ भएको ‘सेञ्चुरी डिबेन्चर २०८८’ नामक ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो। कुल इकाइमध्ये १३ लाख २० हजार इकाइ बैंकले व्यक्तिगत तबरबाट बिक्री गर्नेछ। बाँकी ८ लाख ८० हजार इकाइ...
एनएमबि बैंकको रु. ३.५ अर्बको ऋणपत्र वैशाख २१ बाट बिक्री खुला गरिने, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंकको ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र यही वैशाख २१ गतेबाट बिक्री खुला गरिने भएको छ। बैंकको एनएमबि ऊर्जा ऋणपत्र (इनर्जी बन्ड–२’को बिक्री खुला गरिने भएको हो। यो ऋणपत्रको १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३५ लाख इकाइ बिक्री खुला गरिनेछ। जसमा २१ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट बिक्री गरिनेछ भने बाँकी १४ लाख इकाइ...